फेरि चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार : सिन्धुली अस्पतालका डा. दिवस ढकालमाथि बिरामीका श्रीमानबाट हातपात – Health Post Nepal
फेरि चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार : सिन्धुली अस्पतालका डा. दिवस ढकालमाथि बिरामीका श्रीमानबाट हातपात
२०७६ जेठ २८ गते १५:०१
सिन्धुली अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकमाथि अस्पतालपरिसरमै तल्लोस्तरको गालीगलौज तथा हातपात गरिएको छ । सोमबार राति साढे ११ बजे अस्पतालको आकस्मिककक्षमा रहेका डा. दिवस ढकालमाथि हातपातसहित अभद्र व्यवहार भएको हो । पछिल्लो दुई सातामा चिकित्सकमाथि कार्यथलोमै आक्रमण भएको यो दोस्रो घटना हो ।
डा. ढकालमाथि कमलामाई–१० का कृष्ण बस्नेतले आक्रमण गरेका हुन् । मानसिक समस्या भएकी श्रीमतीलाई रातको करिब १० बजे अस्पताल ल्याएका श्रीमान् कृष्णले बिरामीलाई पर्याप्त उपचारसेवा नदिई रेफर गरेको आरोप लगाउँदै डा. ढकालमाथि तल्लोस्तरको गालीगलौज, अभद्र व्यवहार हुँदै हातपात नै गरेको पीडित चिकित्सकले बताए । ‘कमलामाई–१० का स्थानीय कृष्ण बस्नेत रातको करिब १० बजे मानसिक समस्या भएकी श्रीमतीलाई अस्पताल ल्याएका रहेछन्,’ डा. ढकालले हेल्थपोस्टसितको टेलिफोनवार्तामा भने, ‘मेरो ड्युटी सकिएको थियो, म आफ्नै क्वार्टरमा थिएँ । बिरामीको अवस्था निकै जटिल भएपछि ड्युटीमा भएका डाक्टर तथा नर्सले मलाई बोलाउनुभयो ।’
मानसिक समस्या लिएर आएको गर्मवती बिरामीलाई उपचार गर्न सम्भव नभएपछि अस्पतालले रेफर गरेको निहुँमा उनले हात हाल्नुका साथै अपमानजनक व्यवहार देखाएको डा. ढकालको भनाइ छ । ‘बिरामीमा आकस्मिक मानसिक समस्या थियो । हामीले अस्पतालमा सम्भव भएजति उपचारसेवा दिएका थियौँ, तर बिरामी गर्भवती भएका कारण धेरै औषधि दिन सक्ने अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘अस्पतालबाट थप उपचार हुन नसक्ने भएपछि रेफर गरिदियौँ । त्यसपछि बिरामीका श्रमान्ले हात हाल्ने तथा धम्क्याउने काम गरे ।’
दुई सातामा चिकित्सकमाथि आक्रमणको दोस्रो घटना
पछिल्लो समय ड्युटीमा रहेका चिकित्सकमाथि आक्रमणका घटना बढ्दै गएका छन् । दुई साताअघि हेटौँडा अस्पतालमा कार्यरत डा. वन्दना अधिकारीमाथि यसैगरी बिरामी गर्भवती महिलाका ससुरा हेटौँडा कमानीका परमानन्द मिश्रले आक्रमण गरेका थिए ।
१४ जेठको राति साढे १० बजे अस्पतालको आकस्मिककक्षमा कार्यरत रहेकै वेला डा. अधिकारीमाथि टुल प्रहार भएको थियो । घटनाका दोषी मिश्र एक सातापछि प्रहरीको नियन्त्रणमा आएका थिए । यसरी अहोरात्र बिरामीको सेवामा खटिने चिकित्सकमाथि भौतिक रूपमै आक्रमणका घटना बढ्दै जानुले स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमै चुनौती खडा गरेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।
दोषीलाई विनाधरौटी जेलचलान गर : चिकित्सक संघ
सोमबार रातिको सिन्धुली घटनाबारे मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल चिकित्सक संघले आफ्ना आजीवन सदस्य डा. ढकाल तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्ने व्यक्तिलाई तत्काल कानुनी दायराभित्र ल्याई कारबाही गर्न सरकार तथा सुरक्षा निकायसमक्ष माग गरेको छ ।
संशोधनको प्रक्रियामा रहेको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ तथा नियमावली २०६९ मा व्यवस्था भएबमोजिम दोषीलाई विनाधरौटी जेलचलान गरेर कारबाहीप्रक्रिया अगाडि बढाउन संघको माग छ । संघले घटनाको घोर भत्र्सना तथा निन्दा गरेको छ ।
डा. दिवस ढकाल